Shizuka Itou – Cast – MMANIME
Tower of God Synopsis of Tower of God လူတိုင်းဟာထိပ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုလိုချင်ကြစမြဲပါ ဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲ အဲ့ဒီအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့သူဟာဘယ်အရာကိုမဆိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိနေပါပြီ ထိပ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီtowerကြီးတစ်ခုကိုပြောတာပါ အဲ့ဒီtowerကိုရောက်တဲ့သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်တည်နေသမျှ တည်ရှိနေသမျှ အဆုံးစွန်ဆုံးဗျာ crushကိုတောင်သိမ်းပိုက်နိုင်တယ် အရာအားလုံးကကိုယ့်အတွက်ဖြစ်လာမှာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဘုရားသခင်တစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ်ကောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အဲ့ဒီရမ္မက်စိတ် လောဘစိတ်နဲ့ အတ္တစိတ်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး towerရဲ့ထိပ်အစွန်းကိုတက်ပြီး အရမ်းလှပတဲ့ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ကြယ်လေးတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့ Rachelဆိုတဲ့မိန်းကလေးရယ် သူ့အတွက်သာဆိုရင် အသက်ပဲပေးရပေးရ ဘာမဆိုပေးစပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Bamဆိုတဲ့ကောင်လေးရယ် သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဇာတ်လမ်းကိုဖော်ကျူးထားတာလေးပါ…. Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13
TMDb: 9.3/10 50 votes
Tower of God လူတိုင်းဟာထိပ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုလိုချင်ကြစမြဲပါ ဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲ အဲ့ဒီအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့သူဟာဘယ်အရာကိုမဆိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိနေပါပြီ ထိပ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီtowerကြီးတစ်ခုကိုပြောတာပါ အဲ့ဒီtowerကိုရောက်တဲ့သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်တည်နေသမျှ တည်ရှိနေသမျှ အဆုံးစွန်ဆုံးဗျာ crushကိုတောင်သိမ်းပိုက်နိုင်တယ် အရာအားလုံးကကိုယ့်အတွက်ဖြစ်လာမှာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဘုရားသခင်တစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ်ကောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အဲ့ဒီရမ္မက်စိတ် လောဘစိတ်နဲ့ အတ္တစိတ်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး towerရဲ့ထိပ်အစွန်းကိုတက်ပြီး အရမ်းလှပတဲ့ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ကြယ်လေးတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့ Rachelဆိုတဲ့မိန်းကလေးရယ် သူ့အတွက်သာဆိုရင် အသက်ပဲပေးရပေးရ ဘာမဆိုပေးစပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Bamဆိုတဲ့ကောင်လေးရယ် သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဇာတ်လမ်းကိုဖော်ကျူးထားတာလေးပါ.... Translated by Kan San Encoded by Shine Bo Bo Latt Season  Episode 1 [1080p] Mega.nz / Mediafire / Gdrive Episode 1 [720p] Mega.nz / Mediafire / Gdrive Episode2[1080p] Gdrive / Mediafire Episode2[720p] Gdrive / Mediafire Episode3[1080p] Yandex / Gdrive / ...
TMDb: 9.3/10 39 votes
Release the Spyce Release the Spyce Name - Release the Spyce Status - ongoing Genres - Action and School Aired - Oct72018 ?? Broadcast - Every Sunday Review ကေတာ့ Momo ဆိုတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေလးဟာTsukikage ဆိုတဲ့ secret organization တစ္ခုရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးပါ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္တစ္ဦးျဖစ္တာနဲ႕ အညီ သူမရဲ႕ senior Yuki နဲ႕အတူ အဖြဲ႕သားေတြနဲ႔ Sorasaki ဆိုတဲ့သူတို႕ျမိဳ႕ေလးကို ဒုစရိုက္ ဂိုဏ္း ကေန ကာကြယ္ဖို႕ ႀကိဳးစားပံုကို ဒီတစ္ပတ္ကေနစျပီး page မွာ ဆက္လက္ေစာင့္ႀကည့္သြားပါခင္ဗ်ာ…… Note - ဂ်ပန္မွာထြက္ျပီး Monday ညဆိုရင္ အပိုင္းသစ္တင္ေပးပါ့မယ္ #bk ep 01 ep 02 ep 03 ep 04 ep 05 ep 06 ep 07 ep ...
High School DxD Hero High School DXD Hero Total episodes 12 General: Action, Comedy, Demons, Ecchi, Harem, Romance, School Rating R+ - Mind Nudity Download Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 lazyAss
TMDb: 8.3/10 284 votes